132s Kungani la maRepublican emane ephikisana nomthethosivivinywa wokuvuselela ama-Senate images and subtitles
Isizwe sethu sakhiwe phezu kwesithunzi somsebenzi. Lokho okwenziwa yile bhili, ngaphandle kokukulungisa, kusho ukuthi ungathola imali eningi ngokuba semsebenzini kunalokho ongakwenza ngenkathi usebenza. Lokho kuyisisusa esiphambanisayo. Ngeke sahlose ukukhuthaza abantu ukungasebenzi nokwenza imali eningi kunokubuyela emsebenzini futhi uthole inkokhelo yakho ejwayelekile. -Ukuthola lo mthetho, inkokhelo engu- $ 600 ngaphezulu kwezinzuzo zombuso empeleni ivumela abantu ukuthi imali yabo icishe iphindwe kabili ezimweni ezithile. Futhi ngifuna ukusiza abantu. Ngifuna ukuqiniseka ukuthi, uma ulahlekelwa ngumsebenzi, ukuthi simboza iholo lakho. Kepha ngaphansi kwalomthethosivivinywa, uthola u- $ 23.15 ngehora, kususelwa esontweni lomsebenzi amahora angama-40, hhayi ukusebenza. Lokhu-ke kuyimpikiswano yokuthi ngabe cha Sizokwenza umthethosivivinywa ongabhaliwe kahle ngqongqotha lesi sizwe esisiba nzima ezinyangeni ezizayo ngokwanda kwemisebenzi ngokungazi. Yilokho le mpikiswano emayelana nakho. Ngakho-ke sifuna ukwenza into elula impela. Sifuna ukulungisa okuphukile lapha ngokusho ukuthi izinzuzo zomshuwalense wokungasebenzi kufanele ikwazi ukukhuphuka ngo-100% womholo owawunawo ngaphambi kokuba ungasebenzi. Lokhu akukhona nje ngabantu asebevele benziwe bangasebenzi. Lokhu kumayelana nabantu abazokwenziwa bangasebenzi emasontweni ezayo. Konke lokhu kuchitshiyelwa kusithi ukuvota emizuzwini embalwa wukuthi kufanele sihlomule imihlomulo yokungasebenzi kuma-100% emiholo oyitholile ngenkathi usebenza. -Fumana lo mthetho, njengoba kubhaliwe manje, uhulumeni uzokhokhela abantu baseMelika abaningi ngaphezulu ukuba ngosizo lukahulumeni kunalokho ebebengenza khona uma besebenza emisebenzini yabo ejwayelekile. Ngiyakweseka ukwandisa uhlelo lomshuwalense wokungasebenzi. Kuyindlela engcono futhi esheshayo yokuthola imali kubantu abakudinga kakhulu. Kepha akufanele sakhe uhlelo lapho izinzuzo zomshuwalense wokungasebenzi ziphakeme kuneholo. Ngeke sikhokhe abantu ngaphezulu ukuthi bangasebenzi kunokuba basebenze. Lokhu kungumqondo ojwayelekile oyisisekelo.
Kungani la maRepublican emane ephikisana nomthethosivivinywa wokuvuselela ama-Senate
< start="0.1" dur="5.1"> Isizwe sethu sakhiwe phezu kwesithunzi somsebenzi. >
< start="5.2" dur="3.768"> Lokho okwenziwa yile bhili, ngaphandle kokukulungisa, >
< start="8.968" dur="4.366"> kusho ukuthi ungathola imali eningi >
< start="13.334" dur="2.534"> ngokuba semsebenzini >
< start="15.868" dur="3.033"> kunalokho ongakwenza ngenkathi usebenza. >
< start="18.901" dur="4.433"> Lokho kuyisisusa esiphambanisayo. >
< start="23.334" dur="5.367"> Ngeke sahlose ukukhuthaza abantu >
< start="28.701" dur="3.432"> ukungasebenzi nokwenza imali eningi >
< start="32.133" dur="5.167"> kunokubuyela emsebenzini futhi uthole inkokhelo yakho ejwayelekile. >
< start="37.3" dur="2.534"> -Ukuthola lo mthetho, inkokhelo engu- $ 600 >
< start="39.834" dur="2.1"> ngaphezulu kwezinzuzo zombuso >
< start="41.934" dur="3.4"> empeleni ivumela abantu ukuthi imali yabo icishe iphindwe kabili >
< start="45.334" dur="1.733"> ezimweni ezithile. >
< start="47.067" dur="1.2"> Futhi ngifuna ukusiza abantu. >
< start="48.267" dur="2.866"> Ngifuna ukuqiniseka ukuthi, uma ulahlekelwa ngumsebenzi, >
< start="51.133" dur="2.334"> ukuthi simboza iholo lakho. >
< start="53.467" dur="4.9"> Kepha ngaphansi kwalomthethosivivinywa, uthola u- $ 23.15 ngehora, >
< start="58.367" dur="3.2"> kususelwa esontweni lomsebenzi amahora angama-40, hhayi ukusebenza. >
< start="61.567" dur="2"> Lokhu-ke kuyimpikiswano yokuthi ngabe cha >
< start="63.567" dur="2.633"> Sizokwenza umthethosivivinywa ongabhaliwe kahle >
< start="66.2" dur="3.467"> ngqongqotha lesi sizwe esisiba nzima ezinyangeni ezizayo >
< start="69.667" dur="3.8"> ngokwanda kwemisebenzi ngokungazi. >
< start="73.467" dur="1.7"> Yilokho le mpikiswano emayelana nakho. >
< start="75.167" dur="1.866"> Ngakho-ke sifuna ukwenza into elula impela. >
< start="77.033" dur="2"> Sifuna ukulungisa okuphukile lapha >
< start="79.033" dur="2.634"> ngokusho ukuthi izinzuzo zomshuwalense wokungasebenzi >
< start="81.667" dur="2.4"> kufanele ikwazi ukukhuphuka ngo-100% >
< start="84.067" dur="2.5"> womholo owawunawo ngaphambi kokuba ungasebenzi. >
< start="86.567" dur="3.267"> Lokhu akukhona nje ngabantu asebevele benziwe bangasebenzi. >
< start="89.834" dur="2.6"> Lokhu kumayelana nabantu abazokwenziwa bangasebenzi >
< start="92.434" dur="1.5"> emasontweni ezayo. >
< start="93.934" dur="3.4"> Konke lokhu kuchitshiyelwa kusithi ukuvota emizuzwini embalwa >
< start="97.334" dur="2.467"> wukuthi kufanele sihlomule imihlomulo yokungasebenzi >
< start="99.801" dur="4.332"> kuma-100% emiholo oyitholile ngenkathi usebenza. >
< start="104.133" dur="1.867"> -Fumana lo mthetho, njengoba kubhaliwe manje, >
< start="106" dur="1.767"> uhulumeni uzokhokhela abantu baseMelika abaningi ngaphezulu >
< start="107.767" dur="1.7"> ukuba ngosizo lukahulumeni >
< start="109.467" dur="2.434"> kunalokho ebebengenza khona uma besebenza emisebenzini yabo ejwayelekile. >
< start="111.901" dur="3.7"> Ngiyakweseka ukwandisa uhlelo lomshuwalense wokungasebenzi. >
< start="115.601" dur="2.399"> Kuyindlela engcono futhi esheshayo yokuthola imali >
< start="118" dur="2.133"> kubantu abakudinga kakhulu. >
< start="120.133" dur="1.801"> Kepha akufanele sakhe uhlelo >
< start="121.934" dur="2.066"> lapho izinzuzo zomshuwalense wokungasebenzi >
< start="124" dur="2.334"> ziphakeme kuneholo. >
< start="126.334" dur="3.133"> Ngeke sikhokhe abantu ngaphezulu ukuthi bangasebenzi kunokuba basebenze. >
< start="129.467" dur="1.501"> Lokhu kungumqondo ojwayelekile oyisisekelo. >